10 PC Imidlalo efuna iimfuno ezimbalwa | Iindaba zeGajethi
10 PC Imidlalo efuna iimfuno ezimbalwa
Itekhnoloji iqhubela phambili ngokuxhuma kunye nemida kwaye sinokukubona oku kubonakaliswa kuyo nayiphi na indawo yobomi bethu. Ehlabathini lemidlalo yevidiyo le nkqubela phambili ayibonwa kwaye sibona ngakumbi nangakumbi imidlalo enokubakho kwemizobo kunye nehlabathi elibanzi. Oku kuthetha ukuba ukuba sifuna ukuqhubeka nokudlala eyona midlalo ikhoyo ngoku, amaqela ethu azakusokola ngakumbi nangakumbi ukuyiphumeza., ekubeni zifuna amandla angakumbi.
Kumaqonga anje ngee-consoles, asinayo le ngxaki, kuba endaweni yokufuna ukuphucula izixhobo, ngabaphuhlisi abafuna ukwandisa imidlalo yabo ukuba iqhutywe kwinkqubo nganye. Oku akwenzeki kwiPC apho thina, abasebenzisi, kufuneka siqwalasele umdlalo okanye izixhobo zethu ukonwabela imidlalo yevidiyo ngendlela ezinzileyo, yiyo loo nto. Kweli nqaku siza kukunceda ngokwenza phezulu 10 imidlalo best apho sinokudlala neqela elidala okanye elithobekileyo.
1 Ziziphi iimfuno zomdlalo?
2 Iimidlalo ezili-10 ezilungileyo ezineemfuno ezimbalwa
2.1 I-Diablo 2 ivukile
2.3 khawula uqhankqalazo
2.4 Ubudala be-Empires 2 uHlelo oluqinisekileyo
2.5 Intlambo yaseStardew
2.6 Isibhedlele ezimbini
2.9 Phakathi kweU
Ziziphi iimfuno zomdlalo?
Imidlalo yevidiyo yisoftware efuna ihardware ukuba isebenze, ezi mfuno ziqala ukusuka iprosesa, imizobo, uhlobo lwenkumbulo kunye nobungakanani, okanye inkqubo yokusebenza ngokwayo. Umdlalo omtsha kukuba, uhlala ucela amandla angakumbi kunye nezixhobo zangoku kunye nezangoku. Kodwa kukho iimeko kwaye kunjalo imidlalo ye-indie nangona imitsha, idla ngokubaleka kwihardware endala kunye nolona luhlu lusezantsi.
Enye inqaku ekufuneka uyikhumbule kukuba ukuthenga ikhompyuter entsha akukuniki ukufikelela kuyo yonke imidlalo yangoku, kuba kukho uluhlu oluhlukeneyo lwamacandelo, ngoko ke ikhompyuter endala ephezulu iya kuqhubeka inamandla ngakumbi kunekhompyuter entsha. kuluhlu oluphakathi okanye olusezantsi. Oku sinokukubona ngokukodwa kuluhlu lwe iilaptops, apho sinokufumana khona iikhompyuter ezintsha ngokupheleleyo ezingakwaziyo ukuhambisa eyona midlalo isisiseko. Oku kungenxa yokuba iikhomponenti zezi laptops zinexabiso eliphantsi okanye zihlanganiswe ebhodini ngokwayo kwaye ziyilelwe eyona misebenzi yemihla ngemihla.
Ukuqinisekisa ukuba iPC yethu iyahlangabezana neemfuno zomdlalo, kungcono ukusebenzisa inkqubo CPU-Z kwaye siqinisekise ukuba amacandelo ekhompyuter yethu ayahambelana nobuncinci obufunwa ngumdlalo ekuthethwa ngawo. Iimfuno zomdlalo zinokubonwa kwi-Steam okanye kwivenkile ye-Epic ngokwayo.
Iimidlalo ezili-10 ezilungileyo ezineemfuno ezimbalwa
I-Diablo 2 ivukile
Yinto yakudala phakathi kweklasikhi evuswe ngokutsha, icandelo lomzobo elihlaziyiweyo. Lo mdlalo wevidiyo umalunga ne I-RPG yakudala, apho ukulima kunye nokudala iqela lethu yinxalenye ebaluleke kakhulu yomdlalo. Inguqulelo yokuqala yaqala ngonyaka ka-2000 kwaye yaguqula uhlobo lwendima yesenzo, yaba nguvulindlela kolu hlobo lomdlalo wevidiyo.
Umdlalo wevidiyo ugqame ngobunzulu bawo xa sisenza umlingiswa wethu kwaye siwuphucula ukuya kutsho kwimida engalindelekanga, usenza i-monster ekwaziyo ukutshabalalisa izixa ezininzi zeentshaba ngexesha elinye. Sinemowudi yabadlali abaninzi ukuya kuthi ga kwi-8 umdlali co-op nge Battlenet. Ukongeza ekwabelaneni ngamava ethu okutshabalalisa iidemon kunye nabanye amaqabane asi-7, sinokurhweba kunye nabo, ngaloo ndlela senze umdlalo onamathuba angenasiphelo, apho singaze siyeke ukufumana iimfihlo.
Sinokuthenga i-Diablo 2 evusiweyo kwivenkile ye-Battlenet nge-39,99 €
I-Minecraft ayinakuphoswa nakweyiphi na into ephezulu exabisa ityuwa yayo, kuncinci kakhulu kule meko, sijonge eyona ntsebenzo intle ngeyona nto incinci yehardware. Ngumdlalo we Indima yokwenza apho sisebenzisana nehlabathi elivulekileyo elisekelwe kulwakhiwo kunye nokulima. Singakwazi ukwabelana ngamava nabahlobo ngenethiwekhi kwaye sijongane nemiceli mngeni esiziswa lihlabathi ngalinye.
Ngelixa umdlalo umkhulu, imizobo yawo ayifuni nto, ke naliphi na iqela liya kuba nakho ukuwuhambisa ngaphandle kwengxaki. Ubude bayo abunasiphelo ngoko asizi kuzikhupha kwiPC yethu ukuba asifuni kwiiyure ezininzi.
Sinokuthenga iMinecraft kwiSteam nge-19,99 yee-euro
Utata wabadubuli bomntu wokuqala abakhuphisanayo, ikwangumdlalo ongafunekiyo kwihardware njengoko isebenzisa isiseko esidala kwaye itshintshile kancinci kule minyaka idlulileyo. Nangona umdlalo womzobo ungathandeki kakhulu, yeyona nto imnandi esinokuyifumana ukuba sifuna umdlalo wokudubula kwi-intanethi.
Isiseko silula, idabi liqhambuka phakathi kwamaqela amabini kwaye sikhetha ukuba singamapolisa okanye abanqolobi, Umsebenzi wethu kuphela ukuphumelela ngokuchaseneyo, sikhetha icala esilikhethayo, izixhobo kunye nezakhono ziya kufana kwaye siya kuxhomekeka ngokukodwa kwinjongo yethu. Ewe kunjalo, amapolisa kuya kufuneka acime isiqhushumbisi esibekwe ngumnqolobi kwaye ukuba ungumnqolobi kuya kufuneka uthintele amapolisa ukuba angayicimi.
Sinako ukuthenga CSGO on Steam simahla
Ubudala be-Empires 2 uHlelo oluqinisekileyo
Ngeli xesha sibhekisa kumdlalo weqhinga lokugqwesa kwiPC, ayinakuba ngaphandle kweXesha elingafiyo loBukhosi kwinguqulelo yayo yokugqibela yenkcazo ephezulu. Ukanti ngolu phuculo umdlalo uneemfuno ezisezantsi kakhulu kwaye uya kukwazi ukubaleka phantse kulo naliphi na iqela.
Inguqulelo ehlaziyiweyo yale klasiki ibandakanya amaphulo ama-3 kunye nempucuko emi-4 yokuchitha iiyure ezininzi sisenza imikhosi yethu ukuba yoyise ummandla wotshaba, ngoku imizobo ephuculweyo kodwa igcina eyona nto isithimbileyo ngaphezulu kweshumi leminyaka.
Sinokuthenga i-AOE 2 DE kwi-Steam nge-19,99 €
I-Jewel, ligama eligqibeleleyo lokuchaza lo mdlalo, ulinganiswe ngabadlali bobabini kunye nabagxeki njengomsebenzi wobugcisa ngaphandle kokubonakala ngathi kubuhle bayo be-retro. Isenokubonakala ilula kodwa umdlalo ubandakanya i-adventure enzulu kunye nexesha elide njengabanye abambalwa, kuyo kufuneka sinike ubomi kwifama yakudala esiyizuze njengelifa kuyisemkhulu.
Isiseko sibonakala silula, kodwa kulo mdlalo wokudlala indima ayizukufuneka sithathele ingqalelo kuphela konke ukulima kunye nemfuyo yefama yethu.Ukuba akunjalo, kuya kufuneka siqaphele ubudlelwane nabanye abantu basefama kunye nokuphucula isimilo sethu kunye nekhaya lethu. Sinethuba lokuhlola ezinye iifama.
Sinokuthenga i-Stardew Valley kwi-Steam nge-euro eyi-13,99
Ukuba, njengam, ungomnye wabo babesonwabele iSibhedlele esinguMxholo wentsomi kwiminyaka engama-20 eyadlulayo, ngokuqinisekileyo uya kukonwabela esi Sibhedlele samaNqaku amaBini, sisicwangciso-qhinga kunye nomdlalo wolawulo lwezixhobo apho sithatha ulawulo lwesibhedlele esingayeki ukufika. izigulana eziphambeneyo kwaye kufuneka sizihoye nokuba sisiphi na isigulo sabo.
Injongo yethu iya kuba kukukhathalela ukuba izigulana zethu zifike ngokukhuselekileyo kwiindibano zazo zokubonisana kwaye zishiye isibhedlele sethu sisempilweni ngokupheleleyo.. Uburharha buyanda kunye noxinzelelo xa sisilwa ngobhubhani omkhulu okanye amaza abandayo phakathi kwezinye iziganeko.
Singathenga iSibhedlele esiManqaku amabini esonwabisayo kwiSteam nge-€ 34,99
Ukusinda kunye nehlabathi elivulekileyo lidibana kulo mdlalo umangalisayo icebisa ukuba sisinde kwihlabathi lasemva kweapocalyptic apho iintshaba zethu zingabanye abadlali be-intanethi. Baza kuzama ukusibulala nokusiphanga ukuze sifumane izixhobo zethu, besebenzisa izixhobo okanye imigibe.
Siza kuqalisa i-adventure singenanto Kodwa ngelixa sihlola, siya kufumana imathiriyeli ekrwada kunye neendlela zokupheka ukwenza ikhaya lethu, njengezixhobo okanye izixhobo zokusebenza. Ixesha lifutshane njengoko ingozi ihlala ihleli kwaye asazi ukuba siza kufumana ntoni, kuba iintshaba zinokuhlangana ukuba zisichase ukuba sinezixhobo ezininzi kwaye sixhobe kakuhle.
Sinokuthenga umhlwa kwi-Steam nge-39,99 €
Umdlalo obangele uvakalelo ngamaxesha obhubhani ibingulo mdlalo wepati egcwele isitayile esityheli semidlalo emincinci esimanyanisa kwisiphakamiso esimnandi apho sikhuphisana khona ukuya kuthi ga. I-60 jugadores. Umdlalo uquka uthotho lweemvavanyo kunye izifundo zomqobo apho kufuneka sikhawuleze kuneembangi zethu ukuze siphumelele.
Icandelo lobugcisa lilula kakhulu ke ngoko asiyi kuba neengxaki xa sisenza kwikhompyuter yethu, nokuba isisiseko kangakanani na.
Sinokuthenga abafana abaphambeneyo be-Fall kwi-Steam nge-€ 19,99
Omnye waloo midlalo ebangele uvakalelo phakathi kwe-Streamers yayilo lonwabo lwabadlali abaninzi, apho sidibana phakathi kwabantu aba-4 kunye ne-10, kula maqela mabini asekwa apho amabini angabakhohlisi abafuna ukubulala abasebenzi besiphekepheke. Ngoxa injongo yabasebenzi basenqanaweni ikukuqhuba umsebenzi wabo wakusasa enqanaweni, abakhohlisi bamele benze umonakalo ngokulawula inqanawa.
Izenzo zethu ziya kwahlula abasebenzi kwaye kuya kufuneka sisebenzise ithuba xa omnye wabo eyedwa ukuze ambulale, kuba ukuba elinye ilungu labasebenzi lisibona sibulala uya kusinika kwaye abasebenzi baya kusikhupha enqanaweni. . Nasemva kokufa, abadlali bayaqhubeka nokudlala njengababukeli ngaphandle kokukwazi ukunxibelelana nabanye, kodwa benza imisebenzi.
Singathenga Phakathi kwethu kwiSteam nge-euro eyi-2,99 nje ngoku ekunyuselweni
Sigqiba phezulu kunye noko kubini kumgxeki kunye nomdlali, enye yamatye anqabileyo kwiminyaka elishumi edlulileyo. Intshukumo kunye nokudutyulwa ngobuchwephesha obuqhelekileyo be amaqonga esinokuwabona kwimidlalo efana neMetalSlug kodwa enobuhle obuhle iseti kwiikhathuni ezindala, zifana kakhulu nefilimu yokuqala yeDisney ngelo xesha kwi-30s.
Ungenzi mpazamo, ubuhle bayo obuhle kunye nobumnandi akuthethi ukuba sijongene nokuhamba, i-adventure ivelele ngenxa yobunzima bayo ke ukuwela umhlaba wabo we-macabre ozele ziintshaba kuya kuba ngumceli mngeni kumlingisi wethu oyintloko. Umsebenzi wobugcisa wokwenyani ekufuneka singqine u-ewe okanye u-ewe, ngakumbi xa siqwalasela ukuba phantse naliphi na iqela liya kukwazi ukuliqhuba ngokulula.
Sinokuthenga i-Cuphead kwi-Steam nge-19,99 yee-euro
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » 10 PC Imidlalo efuna iimfuno ezimbalwa
Elinjani inqaku elibi, akukho makhonkco kunye nayo yonke intlawulo efunyenwe ngokuqinisekileyo Ungalandeli !!
Enkosi ngengcebiso, amakhonkco ongeziwe. Siza kuthatha ingqalelo ukongeza isindululo imidlalo free kuphela kwixesha elizayo.
I-ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551, iyadlala kwaye iyiprimiyamu [Uhlahlelo]